🥇 ▷ 3 codsi oo lagu raaco dabka Gran Canaria ee dabka nool ✅
3 codsi oo lagu raaco dabka Gran Canaria ee dabka nool
Dabka shirweynihii Gran Canaria, oo Sabtidii la soo dhaafay, Ogosto 17 ka bilaabay Valleseco, ayaa durbadiiba saameeyey in ka badan 60 kiiloo mitir. Dabkaan weyn wuxuu horey u gubay in kabadan 6000 hektar taas oo ku kaliftay in laga saaro in kabadan 9,000 oo qof oo ka kala yimid in kabadan 50 xarumood oo kuyaal 8 degmo oo jasiiradda kamid ah. Xilligan la joogo, qax cusub looma goyn haddii ay dhacdo in ololku sii socdo dhanka Mogán.
Waxaa kale oo suuragal ah in dariska laga saaray guriga aysan si dhakhso leh ugu noqon karin guriga. Dabka wali lama xakamayn iyo adeegyada gurmadka degdega ah waxay ka shaqeeyaan sidii ay u bakhtiin lahaayeen sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Dabka ayaa saamaynaya Tamarta dabiiciga ee Tamadaba waana mid aad u khatar badan. Haddii aad rabto inaad si dhow ula socoto horumarkaaga barnaamijyadan ayaa ah kuwa ay tahay inaad ku soo dejiso taleefankaaga.
Dhamaan ka hortagga dabka!
Codsigani waa kan ugu muhiimsan ee dabagal ku sameyn kara Spain. Kaliya kama warhayo iyaga adduunka oo dhan laakiin waxay kaloo hayaan macluumaad muhiim ah sida gobolka iyaga iyo xitaa macluumaad caawinaya in la garto kuwa masuulka ka ah dabka laftooda. Waa codsiyada ugu dhameystiran ee la raaco dababka ka dhaca Spain oo waxaad kala soo bixi kartaa adigoo gujinaya halkan.
Raadiyo Televisión Canaria (RTVC)
Raadiyo Televisión Canaria waa kan kale ee socda, daqiiqad daqiiqad ah, horumarka dab. Barnaamijkan waxaad ku daawan kartaa kanaalka xitaa haddii aadan ku haysanin DTT-kaaga iyo ogaadaan xaalada dabka iyo sidoo kale arag dhaawaca uu ka sameynayo jasiiradda. Waxaad ka soo degsan kartaa halkan.
Khariidadda Dab-damisku waxay aad ugu eg tahay appkii ugu horreeyay ee aan ku tusnay. Waxay sidoo kale muujisaa dababka adduunka oo dhan cusbooneysiiyay GPS iyo iyadoo la kaashanayo satalaytyada NASA. Gabi ahaanba waa lacag la’aan waxaadna ka heli kartaa adigoo gujinaya halkan.
Wax kasta maahan war xun. Waqtigu wuxuu u muuqdaa inuu caawinayo daminta dabka iyo heerkulka ayaa la filayaa inuu si weyn hoos ugu dhaco, si ay ugu fududaato daminta dabka. Waa midda ugu weyn taariikhda jasiiradaha waxaana jira in ka badan 16 diyaaradood oo ka shaqeeya aagga. Ahmiyaduhu waa in laga fogaado khasaaraha nafaha aadanaha iskuna dayaan in la yareeyo saameynta dabku ku yeeshay dhammaan dhaxalka iyo hantida aagga.
Warar kale oo ku saabsan… google ciyaarta